धेरैको ज्यान लिने ‘सेप्सिस’ के हो, कसरी र किन हुन्छ? लक्षण के के हुन्? – Sky News Nepal
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १४:०० मा प्रकाशित
सेप्सिस भनेको शरीरमा संक्रमण फैलिएर ज्यानै जान सक्ने रोगको एक अवस्था हो। यसलाई शरीरमा रोग विरुद्ध लड्ने तत्वहरु वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले रोगसँग लड्दा उत्पन्न हुने एक किसिमको शारीरिक प्रतिक्रियाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
साथै, यो प्रतिक्रियाले ल्याउने परिवर्तनहरुले शरीरका विभिन्न अंग प्रणालीहरुलाई आक्रमण गरेर काम नलाग्ने बनाउन सक्छ । यसलाई सेप्सिसको विकराल अवस्थाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
सेप्सिसका मूलतः तीन रुप हुन्छन् ?
सेप्सिस कुनै रोग नभई रोगहरुको समूह (सिन्ड्रोम) हो । यसले प्रायजसो उमेर ढल्केका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका जस्तैः एचआइभी÷एड्स, क्यान्सर, अंग प्रत्यारोपण भएका बिरामीहरु, सघन उपचार कक्ष (आइसियु)का बिरामीहरु, चोटपटक लागेका वा पोलेको घाउ भएका बिरामी र कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिएर राखेका बिरामीलाई बढी हुने सम्भावना हुन्छ ।
सेप्सिसको पहिचान र उपचार सक्दो चाँडो हुनु आवश्यक छ किनभने उपचारमा गरिने प्रत्येक घन्टाको ढिलाइले बिरामीको मृत्युदर बढाउँछ। र, चाँडै गरिने उपचारले त्यो मृत्युदरलाई घटाउन सकिन्छ ।
माथि लेखिएका लक्षणसित यदि रत्तचाप अति कम भई बढाउनका निम्ति औषधि प्रयोग गर्नुपरेमा सेप्सिसको अन्तिम अवस्था अथवा विकराल अवस्था मानिन्छ । र, यसको मृत्युदर अति नै धेरै हुन्छ । अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी ।
यदि सेप्सिस अथवा कुनै अंग प्रणालीले काम गर्न छाडेको शंका लाग्ने वित्तिकै तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । आफैंले नजिकैको मेडिकलमा जँचाएर एन्टिबायोटिक भने खानु हुँदैन । अस्पताल वा डाक्टरको परार्मश लिएर मात्र औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
सेप्सिस भएको शंका लागेमा चिकित्सकलाई देखाएर रगत, खकार, पिसाब, छातीको एक्सरे, भिडियो एक्सरे, सिटी स्क्यान वा आवश्यक भएमा एमआरआई समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी बाहेक रोगको किसिम र अंगको प्रणालीमा भएको असर हेरी विभिन्न जाँच गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।
सेप्सिस भएको खण्डमा एन्टिबायोटिक चलाउने, स्लाइन, अक्सिजन र परेको खण्डमा कृत्रिम श्वासप्रश्वास र मिर्गौला खराब भएको खण्डमा डायलाइसिस, रक्तचाप न्यून भएमा बढाउने औषधि र शरीरको कुनै भाग कुहिएमा वा पिप जमेको खण्डमा शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सेप्सिसको रोकथाम गर्न के गर्ने ?
रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हो। केही सामान्य कुरामा ध्यान दिए सेप्सिसबाट बच्न सकिन्छ ।